Shiinaha Manufacturer jaakada jaakada eyga, shirkado, warshad - xigasho
Hoyga > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Dharka eyga
Maaddada waxaa ka mid ah nylon 1000D, microfiber, shabakadda Shuangyi, funaanado iyo waxyaabo kale oo caan ah iyadoon loo eegin qiimaha.
1. Jaakada ugu fiican ee eyga - sii xayawaankaaga jaakad "la jaanqaadaysa" milkiilaha:
(1) Dawaarka saddex-geesoodka ah, ku habboon oo raaxo leh, dharka dhogorta, diirran oo raaxo leh.
(2) Midab u dhigma, badhanka sixirka timaha aan ku dhegganayn, ayaa soo noqon kara waxayna noqon kartaa qoorti toosan, iyo dhexda la hagaajin karo faahfaahin badan ayaa muujineysa ujeedada naqshadeeyaha.
(3) Maaddada waxaa ka mid ah nylon 1000D, microfiber, shabakadda Shuangyi, funaanado iyo waxyaabo kale oo caan ah iyadoon loo eegin qiimaha.
(4) xagaaga, kuleylka wanaagsan ee neefsashada iyo qaboojiyaha maro mesh ku habboon oo leh daabacaadda dhijitaalka ah ee dijitaalka ah iyo ka-hortagga waxsoosaarka macaamiisha baahiyaha duudduuban.
2. Xuduudaha sheyga eeyaha eyga (qeexitaanada)
Dhidid, Microfiber, Nylon 1000D
4. Baakadaha iyo keenida jaakada eyga
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 20 * 10 * 30CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 20CM X 10CM X 30CM. 10PCS / sanduuqa.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 11KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 9KG.
S4aad:Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
S5aad:Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
S9.Oraah noocee ah ayaad aqbashaa Immisa maalmood ayaa lagu jiraa mudada oraahda?
Calaamadaha kulul: Dharka eyga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka
Jaakada badbaadada eeyga